Sunday 5th of December 2021 / 08:06:46 PM
शाहरुख खान जब एक दिन जेल बसे...
फिल्मका माध्यमबाट शाहरुख खान हरेक पटक यो साबित गर्ने प्रयासमा हुन्छन् तर नेटफ्लिक्समा चलिरहेको डेबिड लेटरम्यानको शो मा यो प्रमाणित गराए।
यो शोमा शाहरुख खानले आफ्ना फ्यानहरुले हेर्न पाउने गरी किचनमा खाना बनाए। खानले डेबिडक
श्रीमानले आफ्नी श्रीमतीलाई लेखेको यो पत्रले रूवायो सारा नेपालीलाई,अख़िर के छ त्यस्तो(मन दरो परेर पढ्नुहोस)
अनलाइन दर्पण 2019-11-04
प्रिय मनिषा-मीठो सम्झना=तिम्रो नाममा कोरिरहेको यो पत्र कसरी सुरु गरुँ, आफैँ दोधारमा छु । यो कुनै प्रेम पत्र होइन कि यसमा मायाका कुराहरु हुनेछ । यो त केवल आग्रहपत्र हो, जसमा तिम्रो नाममा मैले आफ्ना मनका बहहरु पोख्दैछु ।मनिषा, तिमी मैले माया गरेको म
कुलतमा फसे प्रकाश सपूत ( भिडियो हेर्नुहोस् )
काठमाडौं / दिदी र भाईको सुमधुर सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउने पर्व तिहार नजिकिँदै गर्दा बरिस्ठ सर्जक रमेश बिजीको मर्मस्पर्शी शब्द संयोजन र होनाहार संगीतकार बिबी अनुरागीको संगीतमा बहुचर्चित सर्वप्रिय गायक राम कृष्ण ढकालको स्वरले सजिएको “टिका माल
रक्षा श्रेष्ठको भिर्ने झोलामा के छ ? भिडियो सहित
काठमाडौं / अखेली दाजु भाइको उत्कृष्ट गीत भिर्नी झोला सार्वजनिक भएकाे छ । धौलागरिमा जन्मिएका लोकप्रिय सर्जक शिव अखेलि र कृष्ण अखेलिको संयुक्त प्रस्तुति नया गीत भिर्नि झोलामा सार्वजनिक भएको छ ।
सम्पूर्ण पक्ष निकै उत्कृष्ट रहेको सो गी
अनलाइन दर्पण 2019-10-15
जब म ६ वर्षकी थिएँ, त्यतिखेर डेटन सहरमा एउटा चर्चित देलिशृङ्खला ‘आइ लभ लुसी’ प्रसारण भइरहेको थियो । यस धारावाहिकको प्रमुख पात्र लुसीको म प्रशंसक थिएँ । म ठूली भएपछि लुसीजस्तै निडर, आत्मनिर्भर र अरुभन्दा भिन्नै प्रकारको केटी बन्छु भन्ने
३ दिनमा ‘कबड्डी ३’ ले गर्याे ४ करोड बढी ग्रस कलेक्सन
अनलाइन दर्पण 2019-09-23
काठमाडौं । रामबाबु गुरुङ निर्देशित चलचित्र ‘कबड्डी ३’ ले बक्स अफिसमा उत्साहजनक व्यापार गरेको छ । यो फिल्मले पहिलो विकेन्डमा ४ करोड ३२ लाखको ग्रस कलेक्सन गरेको छ ।
दयाहाङ राई, उपासना सिंह ठकुरी, कर्मा, विल्सन विक्रम राई, बुद्ध
भद्रगोल टिमको नयाँ सिरियल ‘सक्किगो नि’ (हेर्नुहोस् ट्रेलर)
अनलाइन दर्पण 2019-09-12
हाँस्य सिरियल ‘भद्रगोल’ छाडेका कलाकारहरुको समुहले ‘सक्किगो नि ‘ नामक सिरियल ल्याउने भएका छन्।
अर्जुन घिमिरे (पांडे) र कुमार कट्टेल (जिग्री) को नामबाट जेपीटि क्रिएसन दर्ता गरि सिरियल निर्माण शुरु गरिएको हो। सिरियलक
चर्चित गायक सुकदेव अधिकारीको ‘कल्ले बोलायो’ सार्वजनिक (भिडियो सहित)
अनलाइन दर्पण 2019-09-07
सुर्खेत । पछिल्लो समय नेपाली सांगीतिक क्षेत्रमा चर्चित कलाकारहरुकाे संयुक्त प्रस्तुति ‘कल्ले बोलायो’ बोलको गीत सार्वजनिक भएको छ । चर्चित गायक सुकदेव अधिकारी र गायिका मेलिना राईको स्वर रहेको उक्त गितमा रुद्र जिएमको लय त
पहिला मजा लिएर हेर्छन पछि छि छी गर्छनः सरस्वती लामा
कार्यक्रमहरुमा हिपहप र रक गीत गाउदै नाच्न र नचाउननै व्यस्त छिन् । “उडि जाने हावा” बोलको गीतबाट गायन क्षेत्रमा प्रवेश गरेकी हुन । सोलुखुम्बु जिल्लाकी सरस्वती लामा हट कलाकारको लिस्टमा पर्ने गर्छिन् ।
उनले गीत लेख्ने देखि लिएर स
सामाजिक सञ्जालमा जोक हेरेर धेरैपटक हाँस्नुभयो होला, तर कसले बनायो थाहा छ ?
सामाजिक सञ्जालमा मिम बनाएर हँसाउने धेरै छन्, तर उनीहरूलाई थोरैले मात्र चिन्छन्। कसले बनाउँछन् चित्रमा हास्यव्यङ्ग्यका यस्ता सामग्री ? बिबिसी नेपाली सेवाले उनीहरुसँग कुरा गरेर भिडियो रिपोर्ट तयार पारेको छ ।
हाँस्य सिरियल ‘भद्रगोल’को प्रशारण रोकिएको छ ।
श्रृखला निर्देशक दीपक आचार्यका अनुसार, ‘नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि विज्ञापन एजेन्सीसँग सम्झौता नविकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो अहिले भएको छैन । आन्तरिक कुराहरु नमिलेकाले हाम
पक्कै अब बोल्छ नेपाली
अनलाइन दर्पण 2019-07-30
के सम्भव छैन र यहाँ
इच्छाशक्ति, जोस, जाँगर र
प्रोत्साहनरूपी पुरस्कार दिँदै
विकासको अभाव सबैमा खड्किए
पक्कै अब बोल्छ नेपाल ।
दाल भात तरकारीले मनायो ५१ औँ दिन
काठमाडौँ, १० असार । वर्षा राउत अभिनित फिल्म दाल भात तरकारीले राजधानीका तीन सिंगल थिएटरमा प्रदर्शनको ५१ औँ दिन मनाएको छ ।
दाल भात तरकारीले प्रदर्शनको ५१औँ दिनको सफलता प्राप्त गरेसगै अभिनय गरेकै कारण वर्षाले वाहावाही पाइन् । ससीक्षको
अनलाइन दर्पण 2019-05-02
काठमाडौँ, १८ वैशाख । बुधबार कवि अशोक कुँवर ‘नेत्र’ आफ्नो नयाँ कविता सङ्ग्रहलाई पाठकमाझ ल्याए । पहिलो कविता सङ्ग्रह ‘आस्थाका बन्दीहरू’ पाठकमाझ ल्याएको दस वर्षपछि उनको दोस्रो कविता सङ्ग्रह ‘घनश्यामलाई चिठी’ पाठकमा
पाँच बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सकियो तामाङ चलचित्र महोत्सव
अनलाइन दर्पण 2019-04-17
काभ्रे । तामाङ चलचित्र संघको आयोजनामा काभ्रेको भकुण्डेमा तामाङ चलचित्र महोत्सब सम्पन्न भएको छ ।
सात बर्ष पछि काभ्रेको नमोबुद्द नगरपालिकामा आयोजना भएको तीन दिने तामाङ चलचित्र महोत्सव पाँच बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको हो ।
"वहाँ सेटिङग "
अनलाइन दर्पण 2019-04-16
एकाएक फुच्छे नेता
गुच्छे आँखा घुमाउदै
उ प्रती कड्किएर बोल्यो
को हु म?
अनलाइन दर्पण 2019-04-10
चिप्लो लपक्क घस्दिन्छु , माछा ठुला समाउँछु ।
घर गाडी किनेको छु, अझै धेर कमाउँछु ।।१३।।
गरेर खुनको खेती, जुटाएको भनौँ धन ।
झारेर सबको सेखी, उठएँ माथि जीवन ।।१४।।
हिजोको हेर यो खाते , धनाढ्य रातमै भयो ।
अनलाइन दर्पण 2019-03-26
काठमाडौं । गायक सुनिल लामाको हिमाली फेदैको गाउँमा बोलको गीत सार्वजनिक भएको छ । काठमाडौंमा एक कार्यक्रम बिच उक्त गीतको भिडियो सार्वजनिक भएको हो । गायक सुनिल लामाकै संगीत रहेको उक्त गीतका रचनाकार भने समिर लामा हुनुहुन्छ । बरिष्ट संगीतकार शिलाव
अनलाइन दर्पण 2018-09-25
आमा सहर हैन म पनि गाउँमै बसेको छु
फागुन चैतमा बारीमा डल्ला फोर्दा
नाकको प्वालले धुलो ननिलोस् भनी
दिदीको सलले नाक र मुखलाई ढाक्थेँ
आज बारीको धुलो ढाक्न हैन
सडकको धुलो ढाक्न
नाकमुखे कट्टु ल
आयो ‘छक्का पञ्जा–३’ को ट्रेलर, हेरेर मज्जाले हास्नुस ! (भिडियो)
काठमाडौं, ६ असोज । बहुप्रतिक्षित नेपाली चलचित्र ‘छक्का पञ्जा–३’ को ट्रेलर सार्वजनिक भएको छ । युटुब च्यानल मार्फत सार्बजनिक गरेको उक्त ट्रेलरमा चलचित्रले पूर्ण रुपमा दर्शकलाई मनोरन्जन दिने संकेत गर्दछ ।